Soomaaliya oo dhaqaalihii ugu horeeyay ka heshay shidaalka - BBC News Somali
Shirkadda shidaalka ee Shell ayaa kamid ah kuwa caalamka ka macasha saliida
"Kadib dadaalo badan oo ay maxdaxda wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ka samayeen dib u soo celinta xiriirka shirkadaha ku leh xirmooyin shidaal iyo kuwo kale oo maal gashi cusub ka samaysta Soomaaliya ayaa waxaa lagu guulaystay in lagu qanciyo shirkadahaas lagu leeyahay ijaarka xirmooyinka ay haystaan", sidaas waxaa BBC-da u sheegay wasiir ku xigeenka wasaaradda Batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal.
Xigashada Sawirka, HILAL
Wasiir ku xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabduqaadir Hilaal
Wasiir ku xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabduqaadir Hilaal oo BBC-da u warramay xiligaas ayaa sheegay in shirka uu ahaa mid wax ku ool ah ayna muhiimadiisu ahayd in aqoon ahaan iyo xirfad ahaanba la fahmo loona diyaar garoobo qaabka loo soo saarayo iyo nooca uu yahay shidaalka.
Maxamuud Cabduqaadir ayaa sidoo kale sheegay in laga gaashaamanayo in marka shidaalka la soo saaro uusan khatar ugu noqon dadka iyo bayaduba.
Bishii Febraayo ayaa magaalada London waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay arrimaha shidaalka Soomaaliya kaas oo uu ka qeyb galay wasiirka macdanta iyo betroolka ee Soomaaliya.
Balse Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa waxay shirkaasi London ku tilmaameen mid lagu"xaraashayay" kheyraadka Soomaaliya.
Dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa beenisay warkaas waxa ayna sheegtay in shirkii London uu ahaa mid lagu soo bandhigayay macluumaadka sahmin shidaal oo Soomaaliya laga sameeyay.